Kitapo fehiloha fanoratana ho an'ny famantarana famantarana China Manufacturer
Home > Products > Hazo fanondronam-bolo > Kitapo fehiloha fanoratana ho an&#39;ny famantarana famantarana
Reflektor kely ho an'ny fahitana alina amin'ny marika famantarana
Ny jiro fandokoana dia anisan'ny fitaovana ara-toekarena indrindra amin'ny fananganana toeram-piofanana azo antoka. Ny marika fampiasa amin'ny arabe ihany no ahitana jiro mitaratra. Tsy misy perla - tsy mahita maso amin'ny alina. Rehefa manjelanjelatra eo amin'ny fatorana iray izay misy rakotra ranomandry ny milina fanoratana fiara iray, dia toa mipongatra ny jambany ary mahita tsara kokoa amin'ny alina. Ity vokatra ity dia atao hoe retroreflection.
ChiYe dia manondrana maimaim-poana amin'ny gorodona vita amin'ny gorodona vita amin'ny gorodona vita amin'ny gorodona vita amin'ny gorodona vita amin'ny gorodona vita amin'ny gorodona vita amin'ny rongony, voapetaka gorodona vita amin'ny hoditra. so on.